Duulimaad cusub oo ka imanaya San Jose kuna socda Palm Springs ee Alaska Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaad cusub oo ka imanaya San Jose kuna socda Palm Springs ee Alaska Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaad cusub oo ka imanaya San Jose kuna socda Palm Springs ee Alaska Airlines.
Sugidda adeegga aan joogsiga lahayn ee San José ayaa mudnaan u ahayd Madaarka Caalamiga ah ee Palm Springs, tan iyo San José, oo ay weheliso inta kale ee Aagga Baay, waa meesha ugu sarreysa ee dadka deggan iyo ganacsiyada Dooxada Coachella.
Laga bilaabo maanta, socdaalayaashu waxay ku raaxaysan karaan sanadka oo dhan, adeegga aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya Mineta San José International Airport (SJC) iyo Madaarka Caalamiga ah ee Palm Springs (PSP), Inay mahad Alaska Airlines.
Duulimaadyada maalinlaha ah waxay tagaan Mineta San José 8:10 subaxnimo, iyagoo soo galaya Palm Springs wax yar ka hor 9:30 subaxnimo, maalin kasta. Kuwa Palm Springs jooga, duulimaadka maalinlaha ah ee ku socda San José waxa ay tagtaa 10:10 subaxnimo
"Adeeg aan joogsi lahayn ee Palm Springs wuxuu ahaa dariiqa ugu sarreeya ee la codsado dhowr sano," ayuu yiri John Aitken, Agaasimaha Duulista ee SJC. "Xiriirkan ka dhexeeya Dooxada Silicon iyo Dooxada Coachella waa calaamad aad u xiiso badan oo soo kabasho ah, labada gobolna waxay ka faa'iidaysan doonaan ku habboon, adeegga maalinlaha ah."
"Sugidda adeegga aan joogsiga lahayn ee San José waxay ahayd prigaroonka diyaaradaha ee Palm Springs International Airport, "ayuu yiri Ulises Aguirre, Agaasimaha Fulinta ee Duulista ee Magaalada Palm Springs. "San José, oo ay weheliso inta kale ee Aagga Bay, waa meesha ugu sarreysa ee dadka deggan iyo ganacsiyada Dooxada Coachella, waanan uga mahadcelineynaa Alaska Airlines ku xidhida PSP iyo SJC."
Duulimaadka oo qaadanaya 80-daqiiqo ayaa ku duulaya diyaaradda Embraer 175, oo leh 76 kursi; 12 xagga ganacsiga ah iyo 64 xagga dhaqaalaha.
Daah-furka adeeggu waxa uu bilaabmayaa wakhtiga mashquulka ah ee Thanksgiving-ka, kaas oo bilaabmaya maanta, iyada oo Mineta San José International ay filayso 400,000 oo socdaal ah ilaa usbuuca soo socda.